I-Nuciferine powder (475-83-2) hplc =98% | I-AASraw I-Fat ilahlekile i powder
/ iimveliso / Utsalane lweZityalo / I-Nuciferine powder
SKU: 475-83-2. Udidi: Utsalane lweZityalo
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya ku-massage ye-Nuciferine powder (475-83-2), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Nuciferine powder i-alkaloid efunyenwe kwisityalo seNyphaea caerulea kunye neNelumbo nucifera. Ilinomsebenzi wesenzo ohambelana ne-dopamine receptor blockade.Inciphisa i-sedation, hypothermia, iptosis, kunye (kwizinga eliphezulu) i-catalepsy; inqanda umsebenzi ohamba ngokuzenzekelayo, impendulo yokuphepha, i-amphetamine isxicity and stereotypy. I-Nuciferine powder ingakhokelela ukuba i-morphine analgesia. I dose ebulalayo phakathi kwamagundane yi-289 mg / kg. Yakhiwe ngokufanelekileyo ne-apomorphine.
Nuciferine powder ividiyo
I-Raw Nuciferine powder ezisisiseko
igama: Nuciferine powder
I-molecular Formula: C19H21NO2
Isisindo somzimba: 295.38
I-Raw Nuciferine powder ekujikelezweni kwesisindo somzimba
I-nuciferine powder yi-alkaloid efunyenwe ngaphakathi kwizityalo zikaNyphaea caerulea kunye neNelumbo nucifera. Ilinomsebenzi wesenzo ohambelana ne-dopamine receptor blockade.Inciphisa i-sedation, hypothermia, iptosis, kunye (kwizinga eliphezulu) i-catalepsy; inqanda umsebenzi ohamba ngokuzenzekelayo, impendulo yokuphepha, i-amphetamine isxicity and stereotypy. I-Nuciferine powder ingakhokelela ukuba i-morphine analgesia. I dose ebulalayo phakathi kwamagundane yi-289 mg / kg. Yakhiwe ngokufanelekileyo ne-apomorphine.
I-1.Nuciferine i-powder ecocekileyo i-aporphine alkaloid esebenzayo esuka kumaqabunga ka-N. nucifera uGaertn one-anti-hyperlipidemia, i-anti-hypotensive, anti-arrhymic, kunye ne-insulin secretagogue imisebenzi.
2. I-Nuciferine powder ngumviwa obaluleke kakhulu wokunyanga izifo ezinxulumene nokukhuluphala, ngokuphucula i-HFD-induced dyslipidemia kunye ne-foatosis yesibindi kunye nokulimala.
3. I-Nuciferine ipowder eluhlaza ingaba yinto enokuthintela kunye nokunyangwa kwe-hyperuricemia ne-kidney inflammation.
4. I-Nuciferine powder inefuthe elincinci ngeendlela zombini ezixhomekeke ekupheleni kwe-Endothelium kunye neendlela ezingabonakaliyo, zibonisa ukuba i-Nuciferine powder ingaba nempembelelo yokuphazamiseka kwizifo ze-vascular ezinxulumene ne-vasoconstriction engekho.
5. I-Nuciferine powder eluhlaza, ekhishwe kwi-Nelumbo nucifera, inokuvuselela zombini iindidi ze-insulin ekusithekeni kwiziqithi ezikude ngokuvala i-potassium-adenosine triphosphate channels, ichaza iziphumo zesifo sesifo sikashukela seNelumbo nucifera.
6. I-Nuciferine powder (i-CAS 475-83-2) inqanda igalelo elikhuthaza ukuxhatshazwa kwe-nicotine equka i-Wnt / β-catenin ekubonakalisweni komhlaza ongasetyenzana wesifo somhlaza wamaphaphu, inika into enokuthi ibe yinto enokuthi ikhusele i-NSCLC kunye neyeza.
Isilumkiso kwi-Raw Nuciferine powder
Ukubonelela ukugcinwa kwanjengoko kuchazwe kwi-vial product kwaye i-vial igcinwe ngokutywinwa, umkhiqizo ungagcinwa kwiinyanga ze-24 (2-8C).
Naphi na kunokwenzeka, kufuneka ulungiselele kwaye usebenzise izicombululo ngosuku olufanayo. Nangona kunjalo, ukuba kufuneka wenze izicwangciso zesitoreji kusengaphambili, sincoma ukuba ugcine isisombululo njengama-aliquots kwizibilini eziqiniweyo ezixinyiwe kwi-20C. Ngokuqhelekileyo, ezi ziya kusetshenziselwa ukufikelela kwiiveki ezimbini. Ngaphambi kokusetyenziswa, kwaye ngaphambi kokuvula i-vial sincoma ukuba uvumele umkhiqizo wakho ukuba ulingane kunye nobushushu begumbi ubuncinane ngeyure le-1.
Ukupakishwa kwemveliso kunokwenzeka ukuba kuphendulelwe phantsi ngexesha lokuthutha, okubangelwa kwiimveliso eziqhelekileyo ezinamathele entanyeni okanye kwi-cap. thabatha i-vial ngaphandle kwiphakheji yayo kwaye ngokukhawuleza ugubungele ukuvumela ukuba i-compounds iwele phantsi kwe-vial. iimveliso zamanzi, i-centrifuge kwi-200-500 RPM ukuqokelela umbane kwindawo ephantsi kwebhuba. Zama ukuphepha ukulahleka okanye ukungcola ngexesha lokuphatha.
I-Vitro kunye ne-Vivo Characterisation ye-Alkaloid Nuciferine powder
I-lotus engcwele (i-Nelumbo nucifera) iqukethe iiprotochemicals ezininzi kwaye inembali yokusetyenziswa kwabantu. Ukuchonga ukuba zeziphi izixhobo ezinokuthi zinoxanduva lweempembelelo ze-psychotropic ezichazwe, sasebenzisa kwizibikezelo ze-silico zeeprotochemicals ezichongiweyo. I-Nuciferine ipowder eluhlaza, i-alkaloid ingxenye ye-Nelumbo nucifera kunye ne-Nymphaea caerulea, yayineprofayili ye-molecular profi efana ne-antipsychotic compounds. Isifundo sethu sibonisa i-Nuciferine powder usebenzisa i-in vitro kunye namayeza e-pharmological trials.
I-Nuciferine i-powder eluhlaza yayibonakaliswa okokuqala kwi-silico isebenzisa indlela yokufana efanayo, kwaye ilandelwa ngokubaluleka okunye kunye nokuqinisekiswa ngokusebenzisa inkqubo ye-Psychoactive Drug Screening yeSizwe seZiko leMpilo yengqondo. I-Nuciferine powder yavavanywa kwi-vivo kwi-response-twitch response, inhibition yangaphambili ye-puls, umsebenzi we-hyperlocomotor, kunye ne-pardigms yokuxhatshazwa kweziyobisi.
I-Nuciferine powder yabelana ngeprogram ye-receptor efana ne-aripiprazole-njenge-antipsychotic drugs. I-Nuciferine ipowder eluhlaza yayiyi-5-HT2A, i-5-HT2C, kunye ne-5-HT2B, i-agonist ye-5-HT7, i-agonist eyingxenye kwi-D2, i-D5 ne-5-HT6, i-agonist kwi-5-HT1A kunye ne-D4, kwaye wayivimbela i-dopamine transporter. Kwiimodeli zentambo ezichaphazelekayo kwi-antipsychotic drug action, i-Nuciferine powder ivalwe izimpendulo zentloko kunye neempembelelo ezichaphazelayo ezikhethekileyo ze-5-HT2A i-agonist, eyatshintshiswa kwi-clozapine ukukhushulwa kwebala, i-amphetamine eyongeziweyo eyenza umsebenzi wokuqhubela phambili, ukuvimbela umsebenzi we-phencyclidine (PCP) yahlangula ukuphazanyiswa kwe-PCP-okubangelwa ukuphazamiseka kokukhusela isisithi ngaphandle kokungeniswa kwe-catalepsy.
Iprofile ye-molecule ye-Nuciferine powder eluhlaza yayifanayo kodwa ayifani ngokufanayo neyo yabelana ngezidakamizwa ezininzi ezivunyiweyo zokulwa ne-antipsychotic ezibonisa ukuba i-Nuciferine powder inezenzo ezinjenge-antipsychotic-ezifana nezenzo.
I-Nuciferine Raw Powder (i-CAS 475-83-2)
I-Raw Nuciferine yokuthengisa
Indlela yokuthenga i-Nuciferine powder (i-CAS 475-83-2) esuka ku-AASraw abaphakeli
I-Nuciferine Raw Powder Recipes: